Hassan Ali - Somalia Focus
Author Archives: Hassan Ali
Home page: http://www.somaliafocus.com
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo khudbad dhinacyo badan taabaneysa ka jeediyay shirka London ee looga hadlayo arrimaha Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday arrimaha ammaanka iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka hadlay qorshaha ammaanka qaranka uu yahay mid xoojinaya Ciidamada qalabka sida, isla markaana sare u qaadaya tayada ciidamada,...
Muqdisho, 11 May 2017 – Golaha Wasiirada ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa oo uu shir-guddoominayay Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Mudane Xasan Cali Kheyre. Arrimaha kulanka looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa Amniga iyo Xasilinta Dalka iyo Shirka London ka furmay shalay. Golaha Wasiirada ayaa ugu horreyntii soo dhoweeyey...
Madaxda Soomaalida oo London soo dhaweyn loogu sameeyey
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Britain ayaa Munaasabad soo dhaweyn ah u sameyeey Madaxweynaha JF Soomaaliya iyo Madaxda Dowlad gobaleedyada ee ka qaybgalaya Shirka London ayaa ka dhacday magaalada Xarunta u ah Uk. Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas oo khudbad ka jeediyay Munaasabada ayaa Sheegay Sanadkaan Madaxda Soomaalida ayaga oo midaysan oo wax qilaaf ah u dhaxeyn...
Shirkii Looga hadlayaya arrimaha Soomaaliya oo ka socoda LOndon
Shirkii looga hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa ka soconaya magaalada London ee dalka Ingiriiska kaasi oo ay ka qeybgalayaan beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya. Waxaa na shirkan goob joog ka ah Madaxda Soomaaliya, Madax kasocota Bariga Afrika iyo Madax kale oo caalamka ka socota oo lagu casuumay shirka. Shirkan ayaa inta uu socdo waxaa diirada lagu saarayaa arimo...
Nabadoon can ahaa oo Muqdisho lagu dilaya
10,May,2017(SofoNews) Sida ay sheegayaan dadka deegaanka, Nabadoonka la dilay oo magaciisa lagu sheegay Nabadoon C/qaadir Ugaas Farey ayaa kusuganaa xiliga falka uu dhacayay agagaarka buundada Ansalooti ee degmada Waabari,. Maxamed C/Qaadir Ugaas Farey oo ah wiilka uu dhalay nabadoonka ladilay ayaa Warbaahinta u sheegay in aabihiis ay dileen kooxo bistoolado ku hubeesan,...
Madaxweyne Farmaajo oo barakacayaasha Muqdisho booqday
3,May,2017(SofoNews) Max’ed C/laahi Farmaajo Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta kormeeray qaar ka mid ah xeryaha ay ku nool yihiin dadka soo barakayaashs ee magaalada Muqdisho, si uu u hubiyo xaaladda nololeed ee dhabta ah oo ay ku sugan yihiin Barakacayaasha ku sugan gudaha iyo hareeraha magaalada. Madaxwaynaha dowladda F.S ayaa isagoo tixgalinaya xilli roobaadka...
Wiil Soomaali ah oo musaafurin iyo xabsi lagu xakumay dalka Dernmark
3,May,2017(SofoNews) Wararka ka imaanaya dalka Dernmarka ayaa sheegaya in Maxkamad ku taalla dalkaasi ay wiil 25-jir Soomaali ah ku xukuntay labo sano iyo bar xabsi ah, iyo waliba musaafurin ay shuruudi ku xiran tahay kadib markii lagu so oogay faldembiyeed ee halkaasi ka geystay. Waxyaabo qarxa ayaa la sheegey in loo haysto Libaan Ahmed Hassan Warsame oo ah wiil Soomaaliyeed...
Wareegii 1aad oo la soo geba gebeye doorahsada GAlmudug
3,May,2017(SofoNews) Guddiga doorashada madaxweynaha Galmudug ayaa sheegey in wereegii 1aad ee codbixinta doorashada Galmudug ay uu soo geba geboobey waxaana soconaya tirint acodadka., waxaana laga dhursugaya cidda ku guuleysata musharixiinta kala ah Axmed Ducaale Geelle Xaaf, Axmed Shariif iyo C/qaadir Shirwac. Waxaa laga dalbaday musharaxiinta in ay soo dirsadaan wakiilo...
Madaxweyne Farmaajo oo booqanaya dalka Itoobiya
3,MAy,2017(SofoNews) Ilo wareedyo laga helayo madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo uu tagidono dalka Itoobiya halkaasi oo uu kula mulmayo madaxda dalkaasi. Booqashada Madaxweyne Farmaajo ayaa ka dambeysay kadib markii casuumaad rasmi ah uu ka helay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Hailemariam...
Cod bixinta doorashad Galmudug oo socota
3,May,2017(SofoNews) Magaalada Cadaado ee xarunta KMG ah ee maamulka Galmudug ayaa waxaa haatan si toos ah uga soconaya Doorashada Madaxweynaha Galmudug ayadoo ay ku tartamayaan ilaa 3 musharax. Waxaa ka qeybgalaya doorashada Wafdi ka socda dowladda Federaalka oo uu hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdi Faarax Juxa iyo mas’uuliyiin kale. Waxaa haatan soconaya khudabadaha...